Ukumiswa ibhizinisi - njengoba umthetho, kubhekwa futhi isinqumo unolwazi. Ukwamukela leli qiniso kuza ngemva kokuhlaziya isimo nokuqwashisa ngokumiswa njengoba kudingeka. Lapho nixoxa kunesimo ebandleni onengxenye, isinqumo kumele kuthathwe ngazwi linye.
Kanjani le nqubo njengoba ukuqedwa amabhizinisi (izinhlangano ezingokomthetho kanye osomabhizinisi ngamanye)?
Uma emhlanganweni ojwayelekile ke Enesikhathi isinqumo futhi yamukelwa, njengoba kuhlinzekiwe emthethweni wethu, izenzo ezilandelayo kuyoba isinyathelo esilandelayo:
- Abahlanganyeli aphoqelelwe, ngevoti, ukuze uvumele uhlu lwabantu abazohlanganyela ikhomishana idilize. Futhi ukuba amiswe ophethe ukuvalwa - the liquidator.
- zingakadluli izinsuku ezintathu, ngemva kwalesi sinqumo nokuqeda, kufanele wazise ehhovisi lentela indawo.
- Ukulungiselela kwemibhalo yisigaba esibaluleke kakhulu ukuvalwa yenkampani. Amaphepha main kuyoba amadokhumenti alandelayo: Amaminithi omhlangano abahlanganyeli inqubo ukuvalwa, isinqumo liqoke ikomidi ukuvalwa nge uhlu ababambiqhaza, isinqumo ukuqokwa liquidator ibhizinisi. Kuye isimo, kungadinga kanye namanye amadokhumenti.
- ukulungiselela konke okudingekile kufanele uthumele wonke amadokhumenti emagunyeni intela esikhathini esizayo esiseduze. Ukurekhodwa wokufaka kwemibhalo kanye ekuqaleni inqubo ekucwileni ezikweletini inhlangano engokomthetho noma IP uzobe sangena Enobunye. Kuyaphawuleka ukuthi ngemva udaba, isinqumo ukumiswa ekucwileni ezikweletini inkampani kungaba kuphela ukwenza ukulamula umbango.
- Olunye ulwazi mayelana ukuvalwa kwamabhizinisi kufanele ibekwe emaphephandabeni endawo, okungukuthi izinhlelo ezikhethekile.
- Vele kudingeka ngokusemthethweni azise ngokubhala zonke abakweletwayo yayo. Kwenzeka ukuthi inkampani kwavala has izikweletu abakweletwayo, nokukhokhwa izikweletu is ngaphakathi accordance nga Art. 64 we Code Civil. Uma ibhizinisi akakwazi ukuze ngikhokhe izikweleti ekhona, impahla yakhe is wadayiswa endalini.
- liquidating ikhomishana kwenza ibhalansi liquidating, okuyinto evunywe abahlanganyeli inkampani.
Kodwa uma uya ukuvula inkampani yakhe, kudingeka azi kusengaphambili ngokushaywa zonke izici ukwenza umsebenzi ekhethiwe. Ukunakekela ezicashile, ngokwenzenjalo uyogwema izinkinga eziningi ezingalindelekile ekuqaleni umsebenzi wabo. Ngokwesibonelo, eminye imisebenzi ezihilela kokuthola imvume ekhethekile ngomsebenzi wabo - ilayisensi. Kukhona uhlu sivunyiwe, okuyinto libala zonke izinhlobo zomsebenzi ezidinga imisebenzi amalayisense.
Uma unquma bahlanganyele ukuhlinzekwa kwezinsizakalo zokunakekelwa kwezempilo, kufanele ukhiphe idokhumenti njengoba ilayisensi wezokwelapha. Thola ilayisensi imisebenzi yezokwelapha kungaba kusevisi Federal ku Surveillance e Ukunakekelwa kwezempilo kanye Nokuthuthukiswa Komphakathi.
Ukuze wenze lokhu, okokuqala kunakho konke, udinga ukuqoqa amaphepha adingekayo. Zonke imibhalo kufanele zithunyelwe ku kwetinhlobo letikhetsekile kuvunyelwa ezithunyelwe ukuba ibhekisiswe ngendlela esifike ngesikhathi.
Ngaphezu kwalokho, imisebenzi yakho kumele ngokuqinile ekuhambisaneni nale migomo. abasebenzi Special imfundo, imishini serviceable, emisebenzini yakhelwe kahle - lezi izimfuneko main for ukusebenza kwenkampani ilayisensi.
Ngaphezu kwalokho, uma yonke imibhalo yabhalwa kahle futhi imishini futhi izisebenzi ze-ngokuqinile ukuhambisana nayo yonke imingcele isethi, amalayisense ingena esigabeni sokugcina.
Ngokuvamile, abanikazi izinkampani ukunakekelwa kwezempilo uthanda ukuya inkampani abangongoti ukuklanywa amalayisensi. ochwepheshe Inkampani kuzosiza qualitatively futhi ngesikhathi ukulungiselela yonke imininingwane ebalulekile kanye nekufaka sandla ekwenteni kahle yokuthola ilayisensi.
Kuthiwani uma ithambo ezidabukile e lezwaneni olukhulu
Indawo yokudlela "Glade" ku Torez, 89: izithombe kanye nokubuyekeza